ရောင်းရန် နို့ပိုးထည်ထိုးပြီးတိုင်းရင်းသားစတိုင် polyester တရားစွဲ,နို့ပိုးထည်ထိုးပြီးတိုင်းရင်းသားစတိုင် polyester တရားစွဲ အွန်လိုင်း
ပတ်ချာလည် polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီ
ထဲမှာပါတဲ့ / rayon တစ်ခုတည်းဂျာစီ
polyester interlock ထည်
ပတ်ချာလည် polyester interlock ထည်
မွေး & Terry ထည်
tricot ထည် brushed
နေအိမ် interlock ထည် polyester interlock ထည်
နို့ပိုးထည်ထိုးပြီးတိုင်းရင်းသားစတိုင် polyester တရားစွဲ
အားလုံး interlock ထည်
အားလုံး မွေး & Terry ထည်
အားလုံး tricot ထည်
အဖြူ 1.55m 150g ကျည်ဆံအထောက်အထား Poly ခြောက်သွေ့သောမထိုက်မတန်အားကစားရှပ်အင်္ကျီကွက်ထည်
ကျည်ဆံအထောက်အထား Poly ခြောက်သွေ့သောမထိုက်မတန်အားကစားရှပ်အင်္ကျီကွက်ထည်များအတွက်ရရှိနိုင် & nbsp ဖြစ်၏တီရှပ်, အားကစားရှပ်အင်္ကျီ�
အလင်းအစိမ်းရောင် 190g 1.85m မြင့်သိပ်သည်းဆထိုးပြီး CVC pique ထည်
မြင့်သိပ်သည်းဆထိုးပြီး CVC pique ထည်တီရှပ်, ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီအဘို့အ avaiable ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကတစ်ခုတည်းဂျာစီထည် knitting လိမ္မော်ရောင် 1.85m 140g
အဓိကတစ်ခုတည်းဂျာစီထည် knitting လိမ္မော်ရောင် 1.85m 140g အနည်းငယ်ပါးလွှာသည်။
1.85m 150g ပျော့တီရှပ် polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီထည်
ပျော့ပျောင်းသောတီရှပ် polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီထည်အနည်းငယ်ပါးလွှာသည်။
1.8m 250g 100% polyester interlock ထည်
polyester interlock ထည်ပေါ့ပေါ့ကုတ်အင်္ကျီ, ပေါ့ပေါ့စားဆင်ယင်, ဖက်ရှင်အဝတ်အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။
အဝါရောင်အရောင် 130g မြင့်အရည်အသွေးကိုထိုးပြီး polyester အဓိကတစ်ခုတည်းဂျာစီ
ထိုးပြီး polyester အဓိကတစ်ခုတည်းဂျာစီများအတွက်ရရှိနိုင် & nbsp ဖြစ်၏တီရှပ်။
poleyster ထိုးပြီးနို့ပိုးထည်သည်အလွန်ပျော့ဖြစ်ပါတယ် sueded ။
polyester အဓိက interlock
polyester အဓိက interlock ထည် polyester အဓိကဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ polyester အဓိကဖိုင်ဘာ အရာဓာတုဒြပ်ဖိုင်ဘာတဦးမျိုး ချည်ငင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အမျိုးမျိုးသောအရှည်သို့ဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ polyester အဓိကဖိုင်ဘာကြိုးမှ spined ထို့နောက်လက်သီး cutted သော polyester နန်းကြိုးအမျှင်လေးများကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
(1) ယဉ်ပါးဝတ်ဆင်: polyester အဓိက၏ wear ခုခံဒုတိယဖြစ်ပါသည် ဒြပ်ဖိုင်ဘာ၌တည်၏။
(2) ရေစုပ်ယူမှု: polyester အဓိကများ၏အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိမ့်သည်နှင့်လျှပ်ကာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသည်ကောင်းပေမယ်ကြောင့်အနိမ့်ရေစုပ်ဖို့, ကငြိမ်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ဖို့ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်ဆေးဆိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စွာမဟုတ်ပါဘူး။
related ထည်: polyester လွှဲပြောင်းပုံနှိပ် interlock သူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ်ထိုးပြီးထည် တိုင်းရင်းသားစတိုင်တစ်ခုတည်းဂျာစီ
တိုင်းရင်းသားစတိုင် poleyster ထိုးပြီးနို့ပိုးထည် sueded
တန်း3~ 4
အရောင်နှုန်း 500 ကီလိုဂရမ်။
T / T သို့မဟုတ်ဌ / c ကို
သိုက်သို့မဟုတ်ဌ / c ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-25 ရက်အတွင်း။
သေးငယ်တဲ့ပမာဏအတွက်မည်သည့်စမ်းသပ်မှုအမိန့်ဖြစ်ပါသည် ကြိုဆို ဃ ။
နမူနာသို့မဟုတ် ထုထည် shipp ing
နည်းလမ်း သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း အချိန် ပွောဆို
DHL / FedEx / TNT /
ပုံမှန်အားဖြင့်4~6လုပ်အားခ
ကုန် p Collections ဆပ်သို့မဟုတ်ကုန်တင်
DHL အရှိဆုံး,fဖြစ်ပါသည် requently ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ai အားဖြင့် r
ကွဲပြားခြားနားသောဧရိယာ , ကွဲပြားခြားနားသောရေကြောင်းကာလ။
ပင်လယ်နားမှာက ကွဲပြားခြားနားသောဧရိယာ, ကွဲပြားခြားနားသော s ကို ကာလ hipping ။
ဘို့ warder ခန့်အပ်ထားသောသို့မဟုတ်ကျနော်တို့စီစဉ်ဖို့ကူညီ ကိုယ့်။
ဝန်ဆောင်မှုက c harge
ကျွန်တော်တို့ကို $ 30 ကို ~ 1 000
ကျွန်တော်တို့ကို $ 0.3 + 4.4% * ငွေပမာဏ
ကျွန်တော်တို့ကို $ 400င် ~20 င် 00
ကျွန်တော်တို့ကို $ 15 ~ 25
ဘဏ် T / T
ကျွန်တော်တို့ကို $ 100 ဦး0င် ~50 င် 000င်
ကျွန်တော်တို့ကို $ 15 ~ ကျွန်တော်တို့ကို $ 100 ဦး အသုံးအများဆုံးငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများ။
ဘဏ်ဌ / c ကို
ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထက် $ 10000
ကဘဏ်အပေါ် depents ဘေးကင်းလုံခြုံမှု / အနိမ့်အန္တရာယ်
tags များ : polyester နို့ပိုး sueded ထိုးပြီးထည် တိုင်းရင်းသားစတိုင်ထည်
သင်တို့အဘို့အရှာနေတိကျသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာမတှေ့နိုငျသနညျး မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်? ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အီးမေးလ်က : *
မက်ဆေ့ခ်ျကို : *
1.8M 280G One Side Brushed Zebra Stripe Pattern Segment Color Fleece Fabric
1.8M 280G One Side Brushed Zebra Stripe Pattern Segment Color Fleece Fabric is available for casual coat, fashion coat,hoody,pajama and so on.
fluorescence cycling polyester bird eye mesh fabric
1.8m 200g 85% polyester 15% ဝါဂွမ်းနည်းနည်း TC ထိုးပြီးပြင်သစ် Terry
85% polyester 15% ဝါဂွမ်းနည်းနည်း TC ထိုးပြီးပြင်သစ် Terry & nbsp; & nbsp; များအတွက်ရရှိနိုင် & nbsp ဖြစ်၏တီရှပ်, ပေါ့ပေါ့စားဆင်ယင်, ပေါ့ပေါ့ဘောင်းဘီတို။
tianzhu slub ဝါဂွမ်းပြင်သစ် Terry ထည် wicking ပန်းရောင် 1.85m 320g အစိုဓာတ်ကို
tianzhu slub ဝါဂွမ်းပြင်သစ် Terry ထည် wicking အစိုဓာတ်ကိုတီရှပ်, အားကစားရှပ်အင်္ကျီ, ပေါ့ပေါ့ရှပ်အင်္ကျီအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။
Breathable recycle poly spandex butterfly mesh anti baterical weft knit fabric
1.8m 200g 96f နှစ်ခုခြမ်းဖက်ရှင်အင်္ကျီ fdy မွေးထည် brushed
fdy ဇယားကွက်နှစ်ခုအခြမ်းမွေးထည်, ပေါ့ပေါ့အင်္ကျီပဝါများအတွက်ရရှိနိုင် brushed ပုံနှိပ်။
1.8M 240G Polyester Jacquard Brushed Fleece Fabric
1.8M 240G Polyester Jacquard Brushed Fleece Fabric is available for casual coat, fashion coat,hoody,pajama and so on.
ပူ tags များ
65% polyester 35% ဝါဂွမ်းကို double pique
TC နှစ်ဆ pique
fdy ဝင်ရိုးစွန်းမွေး brushed
ထိုးပြီး polyester ဝင်ရိုးစွန်းမွေး
144f polyester ဝင်ရိုးစွန်းမွေး
Tel : +86-592-5715497
ဖက်စ် : +86-592-5715491
အီးမေးလ်က : Kenny@yorgreat.com
အီးမေးလ်က : Julie@yorgreat.com
အီးမေးလ်က : Ryan.cai@yorgreat.com
မူပိုင်ခွင့် © 2020 Yorgreat International Holding Limited..မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. မှပံ့ပိုးသည် dyyseo.com.
ဘာသာရပ် : *